Ranomasimbe Indianina : tohanan’ny Vondrona eoropeanina ny jono | NewsMada
Ranomasimbe Indianina : tohanan’ny Vondrona eoropeanina ny jono
Nanomboka, omaly hatramin’ny rahampitso 7 febroary, any Nosy Maorisy, ny fivorian’ireo solontenan’ny vondrona mpanjono avy amin’ny Nosy manodidina aty amin’ny ranomasimbe Indianina, anisan’izany ny avy eto Madagasikara. Manampy ireo ny avy any Kenya sy Tanzania. Tanjona ny fiaraha-midinika ny fampitomboan’ny COI (Commission de l’océan Indien) ny vola miasa ho an’ny jono (fanjonoana thon) amin’ny fandaharanasa SmarthFish, nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny Vondrona eoropeanina.
Mahatsapa ny ao amin’ny COI, araka ny fanambarana natao tamin’ireo mpivory, fa miantoka ny fampitomboana maharitra ny harinkarena izany karazan-jono izany sy miteraka asa karazany maro any amin’ireo tany mpikambana ao aminy. « Miara-miasa akaiky momba izany toekarena manga izany ny COI sy ny Vondrona eoropeanina. Iaraha-miady hevitra ny fomba hoenti-miasa sy fanatanterahana izany », hoy Ralaimarindaza Luc, nandritra ny fotoam-panokafana ny fivoriana.
« Manana ny toerany lehibe eo amin’ny toekarena ny jono aty amin’ireo Nosy », hoy kosa ny minisitry ny Toekarena any Maorisy, Prem Koonjoo. Izy ihany koa ny misahana ny sehatry ny jono an-dranomasina any aminy. Noho izany, ilaina tandrovina ny faharetan’izany jono izany araka ny lalàna mamaritra azy aty amin’ny faritra. Tanjona ao anatin’ny fampandrosoana maharitra rahateo izany.
Ampahafantarina ireo mpivory, mandritra izany fivoriana izany, ny antsipiriam-baovao rehetra sy ireo antontanisa samihafa mahakasika ny jono aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Miainga avy amin’izany ny fanavaozana izay tokony hatao, ny famatsiam-bola tadiavina, ny tsena, ho tombontsoan’ny firenena isanisany.
Tsiahivina fa tolotra tsara indrindra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny karazan-trondro « thon », anisan’izany ny avy eto Madagasikara. Faritra lehibe amin’izany sehatry ny jono izany ny aty amin’ny ranomasimbe Indianina.